हेर्नुहोस् र गर्नुहोस् Hultsfred मा जानुहोस्
हेर्नुहोस् र गर्नुहोस्
हेम » हेर्नुहोस् र गर्नुहोस्
Hultsfred नगरपालिका मा गर्न धेरै मजा छ र भाग लिन धेरै गतिविधिहरु। परिवार संग एक संग्रहालय को यात्रा? वा एक राम्रो पर्वतारोहण ट्रेल वृद्धि? तपाईले जे जे आविष्कार गर्न चाहानुहुन्छ, हामीसँग सुझावहरू केवल तपाईंको लागि मात्र छ!
राम्रो जाडो माछा मार्नेको साथ वन ताल। अर्जान एउटा सानो चट्टानी ज lake्गल ताल हो जुन तीन साँघुरो भाग हुन्छ। वरिपरि शंकुधारी वन र किनारहरू मिलेर बनेको छ
विशाल कार्पको साथ ताल। फर्ग्सजान एउटा राम्रो उदाहरण हो कि कसरी सानो ज lake्गल ताल ताल खेल माछा पक्रनको लागि एल्डोराडो बन्न सक्छ। Färgsjön को मामला मा
श्रेणीको pikeperch माछा मार्ने ताल। होजोरतेजान भिर्सेरमको ठीक पश्चिममा अवस्थित छ, यो भिर्सेरुमस्जिनको नजिक छ जुन योसँग पनि जोडिएको छ। ताल पोषकतत्वमा कमजोर छ
मोलिल्ला-गोर्वेद गिर्जाघर १ 1800०० मा दुई पल्लीहरू मोल्ला र गार्वेदले संयुक्त पेरिस गठन गरे। यो १ish1768 मा बिशपको भ्रमणपश्चात भयो जब दुवै मिलेला र गोर्वेद काठका चर्चहरू थिए
भेना चर्च लिन्कपिंगको diocese मा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय गिर्जाघर हो। शुरुदेखि नै चर्चमा करीव १,२०० मानिस बसोबास गरिरहेका थिए। केही पुनर्स्थापना पछि त्यसपछि बेंचहरू हटाइयो
एमरलुन्डा चर्च धेरै राम्ररी Emådalen तिर लामो पक्ष संग अवस्थित छ। हालको चर्च १ 1840० मा पूरा भएको थियो, तर सन्‌ १1329२ early सम्ममा त्यहाँ सायद त्यही ठाउँमा एउटा चर्च थियो।
नगरपालिकाको सबैभन्दा ठूलो सहर होल्स्टफ्रेड चर्चमा वास्तवमै सबैभन्दा कान्छी चर्च छ। Hultsfred मा चर्च निर्माण गर्ने योजना केही समयको लागि अवस्थित थियो र १ 1921 २१ मा गरियो
भिर्सेरम चर्च नव गोथिक शैलीमा यसको विशेषता उच्च स्पेर र पोइन्ड आर्चिड विन्डोज र पोर्टलको साथ निर्मित छ। भिर्सेरमको वर्तमान चर्च १ 1879 -1881 -१XNUMX११ मा निर्माण गरिएको थियो। को
Lnenneberga मा, Hultsfredpaintball एक एड्रेनालाईन भरिएको गतिविधि को लागी भोकाएकाहरु को लागी खेल को आयोजन गर्दछ। पेन्टबल एड्रेनालाईन र फिट मनपर्छ जो तपाइँ को लागी एक महान गतिविधि हो
सिंह पिसिया बजार
सिंह फ्ली मार्केटको ² ०० m² सेकेन्ड ह्यान्ड स्टोरमा तपाईंलाई स्वागत छ। फर्निचर सहित दुई फ्लोर र साना आइटमको साथ पूरै फर्श।
ग्रीनहाउस एक अद्भुत दोस्रो हात पसल हो जुन धेरै सामानहरू प्रदान गर्दछ, यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईं हाम्रो वेबसाइटको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ भनेर सोच्नुहुन्छ। ग्रीनहाउसमा स्वागत छ!
खुशी फ्ली मार्केट
लाइकन्स फ्ली मार्केटले रमाइलो दोस्रो-हातका सामानहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं थकित हुनुहुन्न। यहाँ तपाईं सबै राम्रो मूल्यहरूमा पाउनुहुनेछ।
Kupan तपाईंलाई तिनीहरूको शानदार दोस्रो हात पसल मा स्वागत छ। शुक्रवार, शनिबार र आइतवार १०-१-10 बीचमा खोल्नुहोस्।
लिनस लोपिसमा स्वागत छ, दोस्रो-हात सामानले भरिएको एक अद्भुत दोस्रो हात पसल।
फोटोग्राफर र कलाकार एमा जनसन
फोटोग्राफर र कलाकार एम्मा जनसन: मेरो नाम एम्मा जानसन हो। म मेरो साथी र हाम्रो साथ Småland मा Hultsfred बाहिर फार्म मा बस्छु
Virserums Möbellager मा तपाईंलाई स्वागत छ जुन 900 ०० m² को फ्ली मार्केट हो। फर्निचर सहित दुई फ्लोर र साना आइटमको साथ पूरै फर्श।
प्याडल प्याडलबोर्ड स्ट्यान्ड अप
ठूलो गतिविधि कि आरामदायक छ र त्यो चुनौतीपूर्ण पनि हुन सक्छ। तालमा वा ऐना उज्यालो नदीमा जानुहोस्। प्याडल शान्तपूर्वक!
कायाकि शान्त बतास र सुन्दर हिलिजेनको पानीमा शान्त क्षणको आनन्द लिनुहोस्। पानीको सतहमा चुपचाप घुमाउन, किनारमा रोक्नुहोस्
Linden एक पौष्टिक-गरीब ठूलो वन ताल हो जहाँ सफा पानी र धेरै साना टापुहरू छन्। पाइन ज forest्गल, स ,्कुपीन, ब्लुबेरी र हिथर तालको वरिपरि वर्चस्व राख्छन्। ताल गहिरो छ
Stora bkebosjön Hultsfred को पश्चिममा करीव west कि.मी. पश्चिममा अवस्थित छ र तपाईले यो पाउनुहुनेछ यदि road6रोड हमरसेबोबाट Stora Hammarsjön तिर ड्राइभ गर्नुभयो भने। ताल
ढु Gra्गाको खाडल पहाड
सिल्वरडालेनमा तपाईले ढु pit्गाको खाडल देख्नुहुनेछ। समीक्षा
भेनाको प्रोस्क्रेजगेर्डेटमा, त्यहाँ एउटा पहाड छ र स्लेडिding्ग र हिम रेसि .को लागि उपयुक्त छ।
केन्द्रीय Hultsfred मा "Slätten" छिमेक मा तपाईं Slättenbacken, एक सानो र बस सही पहाडी पाउनुहुनेछ। त्यहाँ एक बार्बेक्यु क्षेत्र र प्रकाश छ।
रजतदालेनको खेल मैदान - खेल र शरारतका लागि ठाउँ! उपकरण र आकर्षण स्विings्स् कम्बि प्ले स्यान्डबक्स बारबेक्यु क्षेत्र पिकनिक तालिका (पहुँच अनुकूलित)
मर्लुंडाको खेल मैदान
मार्लुंडाको खेल मैदानमा वरिपरि खेल्नुहोस् - यहाँ पत्ता लगाउन उत्साहजनक चीजहरू छन्! उपकरण र आकर्षणहरू क्लाइम्बिंग फ्रेम साना बच्चाहरूको लागि खेल चढ्ने खेलहरू
खानालाई प्रकृतिबाट काठ र ज with्गलको साथ विषयवस्तुको रूपमा पुन: निर्माण गरिएको छ र नयाँ हरियो क्षेत्र, नयाँ सुरक्षित प्रकाश, गतिविधि क्षेत्रहरू सरलको रूपमा सुसज्जित गरिएको छ।
Virserum को बाथहाउस
भिर्सेरमको बाथहाउस एक सानो नुहाउने सुविधा हो जुन १२ .12,5. x x meters मिटरको तताउने पोखरीको साथ छ। पोखरी ०.6 देखि १. meters मिटरसम्मको गहिराईमा छ।
छत को कम्पाइलले सानो सडकमा सानो यातायातको साथ वायु गर्दछ। यदि तपाईं सम्पूर्ण दूरी चक्र गर्न छनौट गर्नुहुन्छ भने, तपाईं भिन्नताका साथ १ km० किलोमिटरको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ
Hässlid फार्म डिजाइन शप
स्टोर Virserum मा Hotell Dacke सँगसँगै छ। स्थानीय र क्षेत्रीय उत्पादनहरू। शिल्प, हस्तशिल्प, आकार र डिजाइन। काठ, कपडा, सिरेमिक, ऊन, गिलास र अधिक
तान क्षेत्रको पार्किंगको छेउमा अवस्थित छ। यो स्वीडेनको सबैभन्दा ठूलो तानहरू मध्ये एक हो। भिर्सेरमको तान करिब २ 23 बर्ष भैरहेको छ। दुई तलामा उपलब्ध छन्